Sajhasabal.com | Home मलेसिया र दुबईको पैसाको मुल्य बढ्यो, अरु देशको पैसाको मुल्य कति छ ? हेर्नुहोस
महोत्तरीको लक्ष्मीनियाँ वनक्षेत्रमा फेला परेको मृतकको पहिचान खुल्यो
मलेसिया र दुबईको पैसाको मुल्य बढ्यो, अरु देशको पैसाको मुल्य कति छ ? हेर्नुहोस
असार २६, काठमाण्डौ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको एक अमेरिकी डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०१ पैसा छ । हिजो खरिददर १०९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा थियो ।
आज कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २१ पैसा छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २० पैसा रहेको थियो। यूएई दिर्हाम १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ २५ पैसा छ । हिजो खरिददर २९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको थियो।
यस्तै साउदी रियाल आज १ को खरिददर २९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ३३ पैसा छ । हिजो खरिददर २९ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको थियो।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ५८ पैसा छ । बुधबार खरिददर २६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ५५ पैसा थियो ।
आज बहराइन दिनार १ को खरिददर २९० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २९१ रुपैयाँ ८१ पैसा छ । मंगलबार खरिददर २९० रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २९२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको थियो ।
कोरियन वन आज १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३० पैसा थियो । बिहीबार कुवेती दिनार १ को खरिददर ३५९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । हिजो खरिददर ३५९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ १६पैसा थियो ।
महोत्तरीमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको पहिचान खुल्यो